DHAGEYSO Dowlada Soomaaliya oo Hay’adaha Caalamiga ah ku amartay inay Muqdisho u soo guuraan. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Dowlada Soomaaliya oo Hay’adaha Caalamiga ah ku amartay inay Muqdisho u soo guuraan.
Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan wadatashi ah, oo lagula xisaabtamayay Hay’adaha mashaariicda kala duwan ka fuliya gudaha dalka Soomaaliya kuwaasoo fadhigoodu yahay Wadamada kale.
Shirkaan waxaa si wadajir ah u soo qaban qaabiyay Wasaaradda Qorsheynta,iskaashiga Caalamiga iyo Hormarinta dhaqaalaha ee Xukuumadda Fedraalka Soomaaliya iyo Hay’adda iskutagga ururada aan dowliga aheyn.
Dowladda Soomaaliya ayaa Hay’adahan ku wargelisay inay xarumahooda u soo wareejiyaan gudaha Soomaaliya, ayna shaqaaleysiiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee shaqooyinka u baahan.
Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay tahay wadashaqayn wanaagsan oo dhexmarta hay’adaha caalamiga ah iyo dowlada Soomaaliya.
Wasiirka Qosheynta wuxuu sheegay inay Hay’adahaan siiyeen ilaa dhamaandka sanadkaan inay gabi ahaanba xarumahooda u soo wareejiyaan magaalada Muqdisho,Hay’addii aan amarkaas fulina lagala noqon doono ruqsada ay uga shaqayso dalka Soomaaliya.
Wuxuu wasiirku tilaamay inay talaabadaan qayb ka tahay islaxisaabtanka xukuumada Soomaaliya iyo qorsheyaasha dhaqaalaha lagu hormarinayoo maadaama hay’adaha laga doonayo inay canshuurta bixiyaan,dhalinyarada Soomaaliyeedna shaqalaysiiyaan taasoo horseedayso koboc dhaqaale.
Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa mudooyinkii dambe waday dadaalo ku aadan sidii la xisaabtan dhab ah ay u waijihi lahaayeen dhamaan Hay’adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha hormarinta iyo fulinta mashaariicda ka socota gudaha dalka Soomaaliya.
Madaxweynihii hore Soomaaliya Xassan Sheikh oo gaaray magaalada Muqdisho. →